အခမဲ့ LEGO Super Mario expansion set offer ကိုယခုရနိုင်သည်
16 / 08 / 2021 16 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 282 Views စာ0မှတ်ချက် 30389 Fuzzy & မှိုပလက်ဖောင်း, 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ, အခမဲ့, အခမဲ့လက်ဆောင်များ, အခမဲ့ LEGO, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Ideas, Lego, lego သဘောတူညီချက်, lego အပေးအယူ, Lego GWP, Lego Ideas, Lego စူပါမာရီယို, Luigi, ပေးကမ်း, စူပါမာရီယို
အော်ဒါမှာရန်သင့်တော်သောအချိန်ကိုစောင့်နေသူများ Lego စူပါမာရီယို Luigi St. 71387 Adventuresartသင်တန်း အခမဲ့အစုံကမ်းလှမ်းမှုအသစ်တစ်ခုယခုရရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏တောင်းများကိုဖြည့်ချင်ပေမည်။
£ 40 / $ 40 / € 40 တန်ဖိုးရှိမည်သူမဆိုမှာယူပါ စူပါမာရီယို ယနေ့မှစ၍ တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးရှိ မော်ဒယ်များသည် အပြင်းထန်ဆုံး Power-Up များထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင် ၎င်းတို့၏စွန့်စားခန်းများကို တိုးမြှင့်ကူညီပေးရန်အတွက် အခမဲ့ 30389 Fuzzy & Mushroom Platform Expansion Set ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက် ဆောင်ပုဒ်ထဲမှာ။
မင်းရဲ့အဆင့်တွေကိုချဲ့ထွင်ဖို့အပိုင်း ၃၉ ခုနဲ့ module အသစ်နှစ်ခုပါတဲ့ဒီအခမဲ့ Nintendo တည်ဆောက်မှုမှာ Fuzzy ရန်သူလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ၇၁၃၈၉: Lakitu Sky World နှင့်အငြိမ်းစား ၇၁၃၆၁ အက္ခရာအတွဲ - စီးရီး ၁. စုဆောင်းသူသည်ဤအရောင်းမြှင့်တင်မှုအတွက်ဒုတိယမြောက်အခွင့်အလမ်းကိုစုဆောင်းရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ပိုးအိစံ.
ဤကမ်းလှမ်းချက်အတွက်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခြင်းသည်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေမှုကြောင့်ပြဿနာမရှိသလောက်ဖြစ်သင့်သည် အသစ်အစုံ အပြင်အဆင်အတွက်သာဖြစ်သည် Lego စူပါမာရီယို မော်ဒယ်များသည်သဘောတူညီချက်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်။ အသစ်ကိုအော်ဒါမှာသည် Luigi St. 71387 Adventuresartသင်တန်း မင်းရဲ့တည်ဆောက်မှုနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ Luigi controller ပုံကိုအမှတ်ပေးရုံနဲ့လုံလောက်လိမ့်မယ်။
တနည်းအားဖြင့်၊ သင်သည်အခမဲ့နှင့်စာချုပ်ကိုစုဆောင်းနိုင်သည် Lego Ideas 40487 Sailboat Adventure ဆိုတာအဲဒါဘဲ in stock ရှိသေးသည် £ 200 / $ 200 / € 200 နှင့်အထက် ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်ရနိုင်သည်။ ထိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းသည်ရောက်ရန်ခက်ခဲပုံရသော်လည်း၊ ပိုမိုကြီးမားသောဖန်တီးမှုများကဲ့သို့ဖြစ်သည် 71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ ပန်ကာမှုတ်သွင်းခံသင်္ဘောသို့သွားသောအခါသင့်ကိုကောင်းမွန်စေလိမ့်မည်။
၃၀၃၈၉ Fuzzy & Mushroom Platform Expansion Set ကိုစက်တင်ဘာ ၅ ရက်အထိအရည်အချင်းပြည့်အော်ဒါများဖြင့်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံနိုင်သည် Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Seasonal LEGO set အသစ်တွေ့ပြီ၊ နောက်ထပ်အလှဆင်တာတွေရှိလား။
LEGO သည်သင်၏စုဆောင်းမှုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အခမဲ့ VIP အမှတ်များပေးသည် →